chii chinonzi HDMI 2.1 Chirevo; | Huachuang Electronic
HDMI 2.1 Kuverengeka
HDMI ification Kutsanangurwa 2.1 ndiyo yazvino yekuvandudza yeiyo HDMI kududzirwa uye inotsigira huwandu hwepamusoro vhidhiyo resolution uye zororo mareti inosanganisira 8K60 ne 4K120, uye kugadziriswa kunosvika ku10K. Dynamic HDR mafomati zvakare anotsigirwa, uye bandwidth kugona kunokwidziridzwa kusvika 48Gbps.
Kutsigira iyo 48Gbps bandwidth ndiyo itsva Ultra High Speed ​​HDMI Cable. Iyo tambo inovimbisa ekupedzisira yakakwirira-bandwidth inotsamira maficha anotumirwa zvinosanganisira uncompressed 8K vhidhiyo ine HDR. Iyo inoratidzira yakasarudzika yakaderera EMI (electro-magnetic kupindira) iyo inoderedza kukanganiswa nemidziyo isina waya isina waya. Iyo tambo inodzokera kumashure inoenderana uye inogona kushandiswa neiyo iripo yakaiswa ye HDMI michina.
HDMI Kutsanangurwa 2.1 chimiro chakakwirira chinosanganisira:
Yakakwirira vhidhiyo kugadziriswa inotsigira huwandu hwesarudzo yakakwira uye nekukurumidza zororo mitengo inosanganisira 8K60Hz uye 4K120Hz yekunyanyisa kuona uye yakanyorovera-chiito chakadzama. MaSarudzo anosvika 10K anotsigirwawo kutengeserana AV, uye maindasitiri uye akasarudzika useges.
Dynamic HDR rutsigiro runo simbisa nguva imwe neimwe yevhidhiyo inoratidzwa pazvakanakira kudzika, zvakadzama, kupenya, kusiyanisa uye yakajeka mavara magamhi-pane chiitiko-ne-chiitiko kana kunyange chimiro-ne-chimiro.
Iyo Ultra High Speed ​​HDMI Cable inotsigira iyo 48G bandwidth yeisina uncompressed HDMI 2.1 maitiro ekutsigira. Iyo tambo zvakare ine yakadzika kwazvo EMI emission uye inodzokera kumashure inoenderana neyekare shanduro yeHDMI Kujekita uye inogona kushandiswa neiripo HDMI michina.
Ultra High Speed ​​HDMI Cable ine Label